PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-12 - NOLWAZI MBUTHO
SELIDUMELA emasumpeni kowama-idols SA njengoba sekusele isonto elilodwa kuqokwe umanqoba kulo mncintiswano womculo odume cishe umhlaba wonke.
Leli yisonto lokugcina ngaphambili komcimbi wamanqamu ozokuba ngesonto elizayo ecarnival City, egoli, ngalo isonto ntambama.
Ama-idols SA akhonjiswa kumzansi Magic (161) njalo ngesonto ntambama ngehora lesihlanu, kanti kulo nyaka adonse amehlo abaningi abantu njengoba kubonakala sengathi uma sekuvotwa akakusayi kakhulu ngokuthi umuntu ucula kanjani kodwa kuya ngokuthi uphumaphi.
Phela lokhu ngikusho ngemuva kokubona ukuthi kuyanda ukubonakala kwezifunda noma izifundazwe ezahlukene zivotela kakhulu noma ziqala imikhankaso yokuvotela abantu bakuleso sifundazwe.
Kuyiqiniso elingephikwe ukuthi lokhu kuqale ngesikhathi kunqoba ukhaya Mthethwa - lalilikhulu isasasa kwaqhubeka nokubonakala ukuthi itheku liyabaxhasa abalo, ngemuva kwalokho zashintsha izinto wonke umuntu manje usefuna ukuxhasa owangakubo.
Yize abaqophi nabahleli balo mncintiswano bebona kunyuka izinamba zababukeli nesasasa kulabo abahambela lo mncintiswano kodwa futhi kuliqiniso elingephikwe ukuthi idumela liya ngokuya lehla, phela laba abancintisanayo kabasalikhombisi ufuqufuqu nesasasa lokuba kulo mncintiswano.
Phela lapha kukhona abanye abangena esteji ubone nje ukuthi sebelilahlile ithemba, sebeyenza nje ukuze bazibone besesteji.
Engiqale ukukuqaphela wukuthi laba abancintisanayo baqala ukubeka phansi izikhali uma nje sekusukile ezandleni zamajaji ukuthi bayaphuma noma cha.
Kulokhu sibona abantu beshabasheka, bephansi phezulu bezama ukuqoqa amavoti anele ukugcina umthokozisi ekulo mncintiswano, njengoba kuthengwe nenqwaba yama- airtime ukuze kuvotwe kuphindelelwa.
Phela le nsizwa yaseThekwini ikhombisa okukhulu ukuzinikela njalo uma icula kanti nguye kuphela osele kulo mncintiswano omele itheku.
Siyethemba-ke ukuthi namhlanje uzobonakala umehluko, ingaphumi le nsizwa yasethekwini njengoba umphakathi wakwamashu namaphethelo usuwenze umsebenzi omkhulu kangaka.
Njengoba kuzophuma oyedwa kuzobe sekusala ababili okuyibo abazongena kowamanqamu.
ABANTU basethekwini abeseka umthokozisi kuma-idols babambe umoya ukuthi le nsizwa ingaphumi emncintiswaneni kuleli sonto.